छुटेका जोडीलाई जुटायो समाचारले, ‘ आँधीले रोक्न सक्दैन…’ – ebaglung.com
छुटेका जोडीलाई जुटायो समाचारले, ‘ आँधीले रोक्न सक्दैन…’
२०७५ जेष्ठ २९, मंगलवार ११:०२	Top News, अन्य समाचार, विविध
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ जेठ २९ । बन्द कोठाबाट यसै समाचारदाता संग भुमिगत शैलीमा सोमवार विहान सम्म फोन गर्दै पुनर्मिलनका लागि हार–गुहार गरिरहेका थिए एक महिना अघि आफु खुशी विवाह गरेका र पछि परिवारको षडयन्त्रबाट छुट्टिएका जोडीहरुले ।
जुन जोडीले सञ्चार माध्यमबाट आफुहरुको प्रेम सम्वन्ध र दुवै परिवारको दमनको पर्दाफास गर्न हिम्मत गरे । त्यस पछि पैसामा छुटाउनेहरु विच भयो खैलावैला , गल्यो ज्यान अन्ततः ती जोडीको सोमवार भयो मिलन ।
हामीले घटना क्रम मात्रै पस्केका थियौं तर ती जोडीको नाम काल्पानिक राखेका थियौ उनिहरुको यस अघिको समाचारमा । आज उनिहरु विचको मिलन पछि स–गौरव उनिहरुलाइ सार्वजानिक गर्दैछौं । उनिहरु हुन गुल्मी दरवार गाउँपालिका ७ चारपालाका २४ वर्षिय खिम खत्री र धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्वर ३ की १८ वर्षिया सूर्जा परियार । उनिहरु भागी विवाह गरेर भारतमा पुगेको १५ दिन नपुग्दै परिवारजनको षडयन्त्रबाट छुटिनु परेको कारण थियो जातिय विभेद ।
सुर्जाले सदरमुकाम तम्घासमा कक्षा १२ मा पढ्दै थिईन । त्यति नै पढेका खिम भारतमा काम गर्दथे । उनिहरु विच सुरुमा फेशवुक मार्फत चिनजान भएको थियो । उनिहरुको जम्काभेट भयो गएको चैत्र १६ देखि २६ गते सम्म सम्पन्न तेश्रो गुल्मी महोत्सवमा । पहिलो भेटमा सुर्जाको कोठामा बसे उनिहरु ।
त्यस दिन देखि उनिहरु विच जमेको सामिप्यता झन पछि झन गाढा बन्दै गयो । अन्ततः दुवै जना भागी विवाह गरेर भारततिर लागे । भारतको हैरदावादमा पुगेका उनिहरुलाई छुटाउन परिवारद्धारा षडयन्त्र भयो । उनिहरुलाई फकाई फुलाई घर झिकाईयो । उनिहरु ढुक्क हुदै घर फर्किए । यता सुनौली नाकामा अभिभावकहरुले कुरेर बसेका थिए । त्यहाँबाट उनिहरुलाई गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास स्थित एक होटलमा ल्याएर राखियो । दुई दिन सम्म त्यस होटलमा राखेर खिमका परिवारजनले अत्यन्तै दवाव दिए । उनि सुर्जा संग छुटिन तयार भए । सुर्जा छुटिन तयार थिईनन् । केहि भद्र भलादमी बसे । ५ लाख २० हजार सुर्जालाई क्षतिपुर्ति दिने कवुल भयो । त्यो रकम खिमका परिवार संग नहुँदा नहुदै पनि एक आफन्त मार्फत ऋण लिएर तत्काललाई पाँच लाख दिईयो र बाँकी २० हजार पछि दिने सर्त भयो । उनीहरु आ–आफ्नो बाटो लागे ।
घर पुगेपछि दुवैका परिवारले फोन खोसे । घरबाट निक्लन बन्देज गर्दै उच्च निगरानीमा राखे । खिमलाई ‘दमाईकी छोरी ताक्ने’ यो पागल हो भन्दै उनिबाट मन मराउन हेरखोर गर्न धामीकहाँ सम्म लगियो । त्यही क्रममा भागेर खिम साथीको फोन मार्फत यस समाचारदाता संग सुर्जा विना म बाँच्न सक्दिँ, मलाई जातीपाती मतलव छैन, मेरो घर परिवार त्याग्न सक्छु सुर्जालाई त्याग्न सक्दिँन भन्दै फोन गरे ।
त्यस पछि पटक पटक फोन गरेपछि यो समाचारदाता उनले दिएको लोकेशनमा पुग्यो । खिम पागल जस्तै देखिन्थे । उनि संग कुराकानी गरी सकेपछि उनिकी आमालाई फोन गरियो । आमाले पनि अरु आफन्त मार्फत पाँच लाख दिएको खुलसा गरिन् । दुवै राजीखुशी विवाह गर्ने, पछि परिवारजन दुवै मिलेरे केटालाई पाँच लाख तिराएर छुटाउने यो कहाँको कानुन हो ? जस्तो लाग्यो र खोतल्दै गईयो ।
रिर्पोटिङ्ग गर्ने स्थानमा तिनै छुटाउने मध्येका एक दलित नेताले त्रास सिर्जना गरे । केहि युवाहरु जुटी सकेका थिए । खिमलाई यसै समाचारदाता सामु हातपात समेत भयो । त्यसै वखत ती दलित नेता आए । तपाई यहाँबाट गई हाल्नुस भने । उनले भने–‘फेरी पहिला जस्तै घेराउमा पर्नु होला केटाहरु थुप्रै आउँदै छन् । ’
किनकी गएको चुनाव ताका रिर्पोटिङ्गका क्रममा उनको राजनैतिक दलका युवाहरुले यस समाचारदातालाई झण्डै चार घण्टा घेराउ गरेर राखेका थिए । साँझपख सुरक्षाकर्मीको बाक्लो परिचालनबाट त्यहाँबाट सदरमुकाम तम्घास ल्याईएको थियो । त्यही स्थिती सिर्जना गर्न खोजिएको थियो त्यस गुल्मी दरवार गाउँपालिकामा फेरी ।
सदरमुकाममा थुप्रै डन जस्ता देखिने युवाहरुको जमात हुँदाहुदै र थुपै्र खाले डर लाग्दा घटना उठान गर्दा पनि यहाँ पत्रकारहरुलाई असुरक्षा छैन । तर गुल्मी दरवारमा साविकको कुनै एउटा गाविस छ जहाँका केहि युवाहरु कुनै एक राजनैतिक दलको वाहुल्यताको आडमा राणाशासन चलाउँ छन् । त्यही राणा शासन प्रवृद्धि तोडन् चाहन्थे खिमले ।
ति दलित नेताको धम्की र वातवरण पनि त्यस्तै बन्दै गएपछि त्यहाँबाट फर्किएको थियो । खिमलाई थप लछार पछार हुँदै थियो । हाम्रै सामु उनको फोन खोसियो । अर्को दिन फेरी साथीको फोन मार्फत खिमले भने –‘सर म बन्द कोठामा छु । के मेरो मानवअधिार छैन ? मलाई यहाँबाट निकाल्नुस र सुर्जा संग भेट गराउनुुस ।’
हामीले भन्यौ – त्यहाँ आउन बातवरण ठिक छैन तपाई तम्घास आउनुस । उनि तेश्रो दिन घरबाट निस्कन सफल भएर तम्घास आए । करिव आधा घण्टा भिडियोमा उनका कुराहरु रेकर्ड गरियो । त्यतिले मात्र समाचार बन्न सक्दैन्थ्यो । उनकी सुर्जाको कुरा राख्न आवश्यक थियो । खिमलाई धेरै बेर हामीले अल्मलाएर राख्यौं । किनकी उनिहरु विच सुर्जाका साथी मार्फत च्याट कुराकानी हुँदै थियो । हामीले त्यो नम्वर लियौं ।
त्यसको दोश्रो दिन सुर्जाकी आमा संग फोन गरियो । सुर्जा संग सम्पर्क भयो । सुर्जाले आमाका सामु भनिन उसले धोका दियो अव त्यसका कुरा नगर्नुस सकिएको कुरा उल्झाउदा मलाई थप तनाव हुन्छ भनिन । अर्को दिन कोठाबाट आफैले फोन गरिन । भनिन–‘ दाई हिजो आमा संगै भएकोले त्यस्तो भनेकी हुँ , म पनि उ विना बाँच्न सक्दिँन जसरी हुन्छ मलाई यो घरबाट निकाल्नुस प्लीज…………। ’
त्यस पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझियो । खिमले उजुरी दिएका रहेछन् । तर बोलाउँदा सुर्जा र उनका परिवार नआएको बुझियो । जुन कुरा प्रहरी निरीक्षक डाक्टरप्रसाद चौधरी संग राखियो । चौधरीले नयाँगाउँ प्रहरी चौकीलाई आवश्यक निर्देर्शन दिए । त्यहाँको प्रहरी सुर्जाको घरमा पुग्यो । उनिहरुले सुर्जा , उनकी आमा र दाजुलाई सोमवार सदरमुकाम पठाए ।
भौतारिदै रिडीमा रहेका खिमले फोन गरे । उनले भने सर म तम्घास आउँदै छु कतै नजानु होला । त्यसको आधा घण्टा नवित्दै तम्घासको तिनधारा जंगलमा त्यसै चारपालाको युवा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको छ भन्ने खवर आयो । हातखुट्टा सेलायो । पक्कै तिनै भाई हुन भन्ने लाग्यो । म हतार हतार त्यहाँ पुगे । ती युवा झुण्डिएको स्थानमा पुग्न डोरीको प्रयोग कि त मानव साङलो नगरी पुग्नै नसकिने भिर थियो ।
त्यहाँ प्रहरी समेत मानव साङलाको साहयताले पुगेको थियो । अनुहार नहेरुञ्जेल सम्म लगाएको पाईन्ट समेत खिमको जस्तै ठानेर भावविह्वल भएको थिएँ । जव अनुहार हेरे उनि रहेन छन् । त्यही चारपाला चितपानीका २४ वर्षिय सुनिल थापा रहेछन् । उनको आत्महत्या पनि सायद माया प्रेम र विछोड पो थियो कि भन्ने लाग्यो ।
त्यहाँबाट फर्किन साथ खिमको फोन आयो । म पत्रकार महासंघमा थिएँ । त्यस नजिकै होटलमा रहेछन् । त्यहाँ पुग्दा सुर्जा र खिम कुम जोडेर बसेका थिए । साथमा सुर्जाकी आमा र दाजु लगायत पनि भित्र वाहिर गर्दै थिए । सुर्जाका अभिभावकहरु संग बुझ्दा त्यो रकम तिराउने पक्षमा उनिहरु नभएको स्पष्ट पारे ।
आखिर त्यतिवेला त्यो रकमको चारो फाल्ने र खिमलाई सुर्जाबाट छुटिन्छु भन्ने वोल निकाल्न कसले लगायो त ? भन्ने विषय प्रष्ट भयो । त्यति वेला उनिहरुलाई छुटाउने छलफलमा हुनेहरु मध्येको ति दलित नेता लगाएतका मानिसहरु पुनरमिलन हुदै गरेका उनिहरु सामु आएनन् । जुन दलित नेताले त्यो पाँच लाख तिरेको कुनै प्रमाण छ ? भनेर त्यसै पनि उत्तेजित युवाहरुलाई थप उत्तेजित पार्दै थिए ।
उनलाई यहि सवाल गर्न चाहन्छौं कि सवै कुराको प्रमाण हुँदैन तिनै बेप्रमाण र अन्यायको कुरा खोतल्ने काम हो पत्रकारहरुको । आखिर प्रमाण जुट्यो त्यो पाँच लाख फिर्ता गर्न तयार भए सुर्जाका परिवारजन र उनिहरु मिले । तपाई दलित नेता जस्तो मान्छे तपाईहरुलाई त्यत्रो रकम सहित उनिहरुलाई बन्द कोठामा कागज गराएर छुटाउने अधिकार कहाँ छ ? तपाई सरकारको कुन निकाय हो ? त्यसो गर्ने तपाईहरु वलात्कार जस्ता ठुलाठुला घटना पनि त्यसरी नै पैसामा मिलाउन के बेर ? भन्ने यस घटनाले देखाएको छ । के युवा युवती भैसी पाडाको ब्यापार हो ?
खिम पक्षका केहि पढालेखा युवाहरु आए । उनिहरुले उति बैले पनि सुर्जालाई लैजाउँ बरु ५० हजार म दिन्छु भनेका युवाहरु पनि त्यहाँ आए । उनिहरुलाई पुन सोधपुछ गरियो । उनिहरु नछुट्ने कुरा भयो । सुर्जाकी आमाले उक्त रकम एक पैसा नमासी राखेको र त्यो फिर्ता गर्ने बताईन । सुर्जाका दाजुले पनि आफुहरु चेली वेटी बेचेर नहिड्ने परिवार भएको स्पष्ट पारे ।
उनले वहिनी तर्फ आक्रोषित मुद्रमा भन्दै थिए –‘ तिमीले उति वेलै छाड्दिन भनेको भए हामीले रोक्ने थियौं ? मैले फोन खोसे पछि पनि फेरी साथीहरु मार्फत उसै संग कुराकानी ? घुसघुसे संग त केहि लाग्दो रहेन छ । ’
दाजुले त्यसो भन्दा खिमको कोखमा बसेकी सुर्जा मुस्कुराउँदै र लाजले भुतुक्क हुँदै शिर निहुराएकी थिईन । अन्ततः पैसा फिर्ता उनिहरु विवाहका लागि मन्दिर भित्र जाने सहमति गरे पश्चात प्रहरी कार्यालयमा पुगियो । प्रहरीले विवाह गराउन नमिल्ने दुवै अभिभावकको जिम्मा लगायो ।
उनिहरु वाहिर निस्केर तम्घासको भगवती मन्दिरमा पुगेर खिमले सिन्दुर राखे सुर्जाको सिउँदोमा । सुर्जा मुस्कुराईन । वेहुली भन्दा बढि लाजले भुतुक्क भए खिम । जातिय विभेदका पक्षधरहरु त्यो विवाहको कुरा सञ्चार माध्यमा नलैजान दवाव दिदै थिए खिमलाई । खिम आखिर किन दवावमा पर्थे र ? गरे सुखद पुनर्मिलनको उद्घोष र भने–‘अँस्ती मैले भिडियोमा गरेको हार–गुहार समेत वाहिर ल्याउनु होस… । ्््
यसरी मिलेका ती जोडीहरुले दोश्रो पटकको सुहागरात हिजो सदरमुकामको एक होटलमा मनाए । आज चरी फुरुरु ……खै कता उडे । सहभागीहरुले नेपाली चलचित्रको यस्तो गित गुनगुनाउँदै थिए –‘आँधीले रोक्न सक्दैन हुरीले छेक्न सक्दैन्………..
९ घण्टाको भीषण वर्षाले गल्कोटबासी त्राहिमाम् ….
ढोरपाटन ५ को नाथुरी गाउँलाई तरकारी गाउँ घोषणा गर्न आग्रह